စိုင်းစိုင်းရဲ့ ဒိုင်ယာရီ: How to easily convert files to PDF for FREE
PDF printer drivers တွေကို Hard drive မှာ install လုပ်နေခြင်းအားဖြင့် Hard disk Space မှာနေရာပိုယူတယ်၊ Memory resources တွေကိုလည်း နည်းအောင်လုပ်တော့ နဂိုကတည်းက လိပ်လိုသွား နေတဲ့ ကျနော့် ကွန်ပြူတာကိုပိုနှေးကွေး စေတယ်လို့ သိရတယ်။ ဒါနဲ့ ရံဖန်ရံခါ ကျနော့် ဖိုင်တွေကို PDF ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင် PromoOnline Service ကိုသုံးပါတယ်။ အဲဒီ Service က Fee of charge ပါ။ PDF ပြောင်းချင်တဲ့ဖိုင်ကို Browse လုပ်ပြီး ကိုယ့် Email ထည့်ပေးလိုက်ပြီး PDF ပြောင်းပြီးသားကို ကိုယ့် Email ထဲပြန်ပို့ပေးပါတယ်။ အဆင့် (၃) ဆင့် လုပ်ယုံပါဘဲ။
စုစုပေါင်း file types 83 မျိုးလောက် ကို PDF အဖြစ် converted လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
123, bmp, cgm, csv, dbf, dif, doc, dot, dxf, emf, eps, gif, hwp, jpeg, jpg, jtd, jtt,met, mml, odb, odf, odg, odm, odp, ods, odt, otg, oth, otp, ots, ott, pbm, pcd,pct, png, ppm, pps, ppt, psd, pts, ptt, ras, rtf, sda, sdc, sdd, sdp, sdw, sgf, sgl,sgv, slk, smf, stc, std, sti, stw, svm, sxc, sxd, sxg, sxi, sxm, sxt, sxw, tga, tif,tiff, txt, vor, vor, wb2, wk1, wks, wmf, wpd, wps, xbm, xls, xlt, xlw, xml, xpm
1. No download or installation required
2. Easy and effortless.
4. No limit of document file size for upload
1. You can't protect the PDF with password
2. No options at all
3. You might be afraid to upload your sensitive document to PrimoOnline
တကယ်လို့ အမြဲလိုလိုအသုံးပြုမယ် advance options ကို သုံးမယ်ဆိုရင်တော့
[ PrimoPDF ] မှာ Download လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Posted by Sai Sai at 11:18 PM